Toa tsy misy beta 7 an'ny OS X 10.11.4 El Capitan amin'ity herinandro ity | Avy amin'ny mac aho
Toa tsy misy beta 7 an'ny OS X 10.11.4 El Capitan amin'ity herinandro ity
Latsaky ny herinandro monja isika miala ny keynote an'i Apple ary hafahafa amintsika ny tsy manana ny kinova beta satria tonga amin'ny iOS izy, raha izany dia ilay Navoaka omaly ny iOS 9.3 beta fito. Matetika i Apple dia miara-mamoaka ny kinova beta ary tadidiko aza ny namakiako ireo "fitarainana" momba ireo fanavaozana beta rehetra navoaka nandritra iny tolakandro iny ihany ho an'ny OS an'ny lehilahy Cupertino rehetra.
Amin'ity tranga ity dia toa efa manana ny zava-drehetra vonona ny handefa ny iOS 9.3 vaovao amin'ny keynote i Apple amin'ny Alatsinainy 21 miaraka amin'ireo vaovao rehetra hitantsika nandritra ny herinandro maro ary ny ambiny dia ho hitantsika raha hitranga. Heveriko fa hamoaka ny rafi-piasan'ny watchOS vaovao i Apple mba hampifanaraka azy amin'ny iOS, ny rafitra fiasa tvOS vaovao ary angamba ny antsika Tsy mila beta intsony intsony ny OS X ary avoakany ihany koa amin'ny alatsinainy.
Miharihary fa ny fahitana ireo tempo ampiasain'i Apple handefasana fanavaozana nefa tsy avelany hiala sasatra ny mpamorona ary miaraka amina fotoana kely eo anelanelan'ny kinova, anio tolak'andro izy ireo dia afaka mandefa ny beta 7 amin'ny sisa amin'ireo rafitra fiasa, fa ho hitantsika izany afaka ora vitsivitsy.
Ny mazava eto amin'ity tranga ity dia afaka miteny manokana aho fa ny OS X 6 public beta 10.11.4 dia miasa tsara amin'ny iMac-ko ary manantena ny kinova farany hahafahako manatanteraka ny fametrahana maharitra. Tadidio fa isaky ny mametraka beta isika dia tsara ny manao azy amin'ny fizarazaran-tany na kapila mafy ivelany hitsapana ilay kinova nefa tsy ho rafitra fiasanay lehibe.
Hanana beta 7 ve isika anio tolakandro? na ny mifanohitra amin'izay Hiandry ny famoahana ny kinova farany amin'ny alatsinainy ho avy ve ianao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » OS X El Capitan » Toa tsy misy beta 7 an'ny OS X 10.11.4 El Capitan amin'ity herinandro ity
mgandolfo dia hoy izy:
Jordi, hanitsiana ny lohateny ... izay ilay ... misintona
Mamaly an'i mgandolfo
Raha manoratra ny lahatsoratra teo aloha izahay…. Misaotra ny filazana mgandolfo 🙂